‘हरिचन्द्रको हाइकु हाइटमा धावा बोल्दैछु’
- प्रा.डा. रामकुमार पाँडे
प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०७७, शनिबार १२:११
हाइकु नेपालमा फस्टाउँदै गएको छ । नेपाली हाइकु क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ । वर्षेनी हाइकु पुस्तक र पत्रपत्रिकामा हाइकु वर्षदै छन् । यसको मूल कारण हाइकु सर्वप्रिय लघु कविता हुनु नै हो । लघु कविता जम्मा जम्मी १७ अक्षरको कविता त्यो पनि ५-७-५ अक्षरभित्रको शब्द एवंं वाक्यमा अटाउने कविता । हेर्दा जस्ले पनि लेख्न सक्ने जस्तो र बनाउँदा अर्कै आनन्द लाग्ने जापानी शैलीको कविता हाइकु आज विश्व कविता भएको छ ।
विश्वका धेरै देशमा आ-आफ्न भाषामा लेखिदै छ । अंग्रेजीमा लेखिने हाइकुको आफ्नै महत्व छ । अंग्रेजीमा अक्षर गन्तिमा लेखिन्न । तर नेपालीमा जापानी सरह नै हाइकुको संरचनाले अझै पूर्णता प्राप्त गरेको छ । वास्तवमा हाइकु नबुझेर लेख्दा धेरै लेखिदो रहेछ तर जब बुझ्न थालिन्छ लेख्न कठिन लाग्छ । बुझ्नेले कमै लेखे पनि त्यो सटिक हाइकु बन्दछ भने नबुझ्नेले बाह्य स्वरुप र कलेवरमा रचना हुँदा मुस्किलले कम हाइकु नै हाइकु जस्तो हुन पुगेको पाइन्छ ।
पहिलो कुरा त हाइकुको नाममा सेन्यु नै नेपालीमा धेरै आएको देखिन्छ भने हाइकु सङ्कलन भनिएको पुस्तकमा सक्कली हाइकु पाउन शिला खोजे जस्तै हुन जान्छ । हाइकुलाई हल्कासँग लिनेहरुको सिर्जना यस्तै हलुका नै भएर रहेका छन् । साचैको हाइकु सिर्जनाका अनेकौं आयामा ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो महत्वपूर्ण कुरा भनेको बिम्ब नै हो । बिम्ब पनि ऋतुगत प्रयोग हुन्छ । ऋतु अनुसार बानस्पातिक बिस्ब, जैबिक संसार, सौर्य जगत, पार्थिव अवस्था, मानव संसार, मान्छेको मूड, परम्परा सम्वद्ध अनन्त बिम्ब हुन्छन् । ऋतु अनुसार तिनमा आउने परिवर्तन, त्यसले व्यक्त गर्ने मानव जीवन सापेक्ष कुराहरुका बिम्बलाई टिपेर प्रकृति र मानव सम्बन्धको अजर अमर प्रस्तुती जुन पढ्दा अर्कै संसार खडा हुन्छ र त्यसभित्र एउटा दर्शन आत्मको रुपमा साक्षात्कार हुन पुग्छ त्यो नै असली हाइकु हुन जान्छ । सरल ढङ्गमा बिम्ब रहित सोझो ब्यङ्यलाई हाइकुकै शैलीमा उतार्दा सेन्यु हुन पुग्छ । यसलाई सर्वप्रथम बुझ्नु जरुरी छ । अर्को प्रभावशाली कटाइ अर्थात रहस्यमा राखी एकैपल्ट उजागर गर्ने भावमा कुशलता हुनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । दुई वा तीन तत्वको वीच लुकेको सम्बन्ध कुशलतापूर्वक उजागर गर्नु वान्छित छ । हाइकुका अनेक विधि, प्रविधि पनि नभएका हैनन् । हाइकु नै लेख्ने प्रण गर्ने प्रतिभावना कविहरुले हाइकु भित्र लुकेका अनुपमा मिलाउन धेरै कुराको ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । अव हाइकुले पूर्णता प्राप्त गर्छ त्यो कालजयी भएर जिउँदो जाग्दो हुन पुग्छ । माचुओ बाशोको एउटा हाइकु जुन भ्यागुतो र पोखरीका रुपमा विश्वभरि नै ख्यातियुक्त हुनुमा यसको रहस्यमयी प्रस्तुती नै हो । हाइकुमा नव प्रवेशीले क्रमशः यसका तत्वमा ख्याल गरी अघि बढेमा सुन्दर हाइकु रचेर आत्म सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ नै । युवाको सिर्जना क्रममा कवि हरिचन्द्र ढकाल झूल्केका छन् पश्चिमबाट । जापानी शैलीको लघु कविताको फाँटमा सिङ्गो पुस्तक सिर्जना गरेकोमा सर्वप्रथम बधाइ दिन चाहन्छु । उनी यो पुस्तकको प्रकाशनबाट हाइकुकार बनेका छन् । नेपाली हाइकु लेखनमा सामान्य कलेवर हेरेर नक्कल गर्ने एकातिर छन् भने अर्कातिर हाइकु लेखन विषयको अध्ययन गर्दै, बुझ्दै र लेख्दै जाने कविहरु पनि छन् । हाइकुको शास्त्र राम्रै बुझ्ने कविहरु कम छन् । नयाँ सहस्राब्दीदेखि हाइकुमा धेरैको ध्यानाकर्षण हुनुमा विगत दुई दशकमा यस अघि तीन दशकमा नभएका धेरै कुराहरुको विकासले नै हो ।
हाइकु के हो ? हाइकु कसरी लेख्ने ? जस्ता सामान्य ज्ञानका लागि पनि यसको थालनी भएदेखि नयाँ सताब्दी शुरु हुँदासम्म धीत मर्ने गरी हाइकु सिद्धान्त पढ्न पाइन्नथ्यो । आज आएर थुप्रै हाइकु पुस्तकहरुमा जानकारी मूलक भूमिका, राष्ट्रिय स्तरका साहित्यिक पत्र पत्रिकामा लेख रचनाहरुको प्रकाशन र गोष्ठी, प्रवचन आदि हाइकुको स्रोत बनेका छन् । हाइकु लेख्न चाहनेका लागि खोजी गरे केही न केही सामग्री नपाइने अवस्था छैन । साहित्यमा नै कलम चलाएपछि कवि साहित्यकारले आ-आफ्नो विधामा स्रोत सामग्रीको अध्ययन गर्नु जरुरी छ र अग्रणी स्रष्टाको अध्ययन मनन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । ढकालजी आख्यानकार, गजलकारका रुपमा कलम चलायउँदै आएका युवा पुस्ताका साहित्यकार हुन् । अन्य विधामा लामो समयदेखि कलम चलाए पनि हाइकुमा उनको यो नवीन काब्य प्रकाशन हुनु आँफैमा महत्वपूर्ण कार्य हो । पुस्तकमा पहिलो पालोले भविष्य उज्यालो तिर डोराएको छ । हिंडेपछि निरन्तरता रहे लक्ष्यमा पुगिन्छ नै । यसका लागि उनलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु । उनका हाइकुका केही नमूनाहरु :
रित्तियो रस ।
आँशुको भेल ।
के रै’छ र जीवन
थुप्रो खरानी ।
ज्ञानको दियो ।
आशा मौलायो ।
उनको पुस्तकमा सेन्यु कै आधिक्य छ । विशुद्ध हाइकु जति छन् राम्रा छन् । उनको कतिपय सेन्यु बलिया छन् जुन आजको युगलाई प्रतिनिधित्व गर्न सफल लाग्छन् ।
ढल वासना ।
विशिष्ट श्रेणी ।
कुर्सीमा जरा ।
हरिचन्द्रजीको हाइकु सफलतातिर उन्मुख छ । उज्यालो पाउन पाइला सोज्जिए जस्तो लाग्छ । लक्ष्य टाढा देखिन्न । बाटो सोझै छ । कुद्दै भन्दा हेर्दै बिम्ब टिप्दै सुन्दर हाइकुको सिर्जना गर्दै अघि बढ्न उहाँलाई शुभकामना दिदै यो प्रथम पुस्तकका लागि बधाई ज्ञापन गर्दछु ।
(चन्द्रबिन्दु हाइकु सङ्ग्रहको भूमिकाबाट)